घुर्ने समस्या रोक्न चाहानुहुन्छ ? घरको यो बिधी अपनाउनुहोस् सधैको लागी मिल्नेछ राहत – Khabaarpati
घुर्ने समस्या रोक्न चाहानुहुन्छ ? घरको यो बिधी अपनाउनुहोस् सधैको लागी मिल्नेछ राहत
November 12, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on घुर्ने समस्या रोक्न चाहानुहुन्छ ? घरको यो बिधी अपनाउनुहोस् सधैको लागी मिल्नेछ राहत
काठमाडौँ । दिनभरि, जब हामी अन्य कार्यहरूमा व्यस्त हुन्छौं, रातमा हामी धेरै थाकेका हुन्छौं। यस्तो अवस्थामा, हाम्रो थकान मेटाउने पहिलो विचार हाम्रो दिमागमा सुत्नु हो। हामी आशा गर्दछौं कि हामी रातभर कुनै समस्या बिना आराम गरी निदाउँदछौं। तर यस्तो अवस्थामा, जब तपाईंको छेउमा सुतेको व्यक्ति चर्को स्वरमा घुर्न थाल्छ, तब तपाईं राम्ररी निदाउन सक्नुहुन्न। यस पछि, जब तपाईं एक घुर्ने व्यक्तिलाई भोलिपल्ट बिहान नघुर्न भन्नुहुन्छ, तब उसले भन्छ म कहिले घुर्छु ? म घुर्दिन भन्न थाल्छन् । धेरै चोटि मानिसहरूले घुरेको रेकर्ड पनि गर्छन् र त्यसपछि अगाडि सम्पूर्ण रूपमा देखाउँछन्।
तर यी सबैको बावजुद, ती व्यक्ति घुर्न जारी राख्छन् र तपाईंको निद्रा दिनदिनै खराब हुँदै जान्छ। यस्तो अवस्थामा, घुर्ने व्यक्तिलाई दुर्व्यवहार गर्न आवश्यक पर्दैन। यसमा उसको गल्ती छैन। आउनुहोस् पहिला हामी तपाईलाई घुर्नुको कारण बताउँछौं।
हाम्रो घाँटीमा श्वासप्रश्वासको नली वरिपरि घाउहरू कहिलेकाँही हुने गर्दछन्। घाउको कारण यी छालाहरू अलिकति बाहिर आउन थाल्छन्। यस पछि, जब हामी सास लिन्छौं, तब हावाको कारणले, घाँटीको यी भागहरु हिंड्न थाल्दछन् र हामी सुत्दा घुर्नेकोको आवाज निकाल्छौँ ।यदि तपाईं आफ्नो छिमेकीको खर्राउने बानीबाट पनि चिन्तित हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं यो सल्लाह बनाउनको लागि सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। आजको लागि हाम्रो विधि तपाईंको घाँटीमा बनेको घाउलाई मर्मत गर्दछ। र यसैकारणले घुर्नबाट रोक्दछ ।
यो उपाय बनाउन हामीलाई तीन चीज मात्र चाहिन्छ। पहिलो बेसार बेसारमा एन्टी(ब्याक्टेरियल गुणहरू भेटिन्छ र यसले घाउहरू निको पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हामी महलाई अर्को चीजको रूपमा प्रयोग गर्नेछौं। महले घाँटीलाई चिसो र घाउलाई चाँडै निको पार्न मद्दत गर्दछ। यसले घाँटीलाई राम्रोसँग सफा पनि गर्दछ ।
गित गाउँनु भन्दा पहिले तपाईंले धेरै गायकहरूलाई मह र पानी पिउँदै गरेको देख्नु भएको छ। तेस्रो सामग्रीका लागि हामी एक गिलास मनतातो पानी प्रयोग गर्नेछौं। यो पानीले तपाईंको घाँटी को घाउ मा उपस्थित कीटाणुहरुलाई सफा गर्दछ।
यसलाई बनाउन तपाई एक गिलास मनतातो पानीमा एक चम्चा बेसार पाउडर र एक चम्चा मह मिसाउनुहोस्। अब तिनीहरू सबैलाई चम्चाको सहयताले मिक्स गर्नुहोस्। सुत्नु अघि तपाईंले यो मिश्रण हरेक रात पिउनुपर्दछ। यदि तपाइँ ८ देखि १० दिन को लागी, यो पिउनुहुन्छ भने तपाईं फरक देख्नुहुनेछ। यो रातको घुर्ने समस्या रोक्नको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी र सस्तो विधि हो।
कानमा रौं पलाएको छ ? यस्तो रोग लागेको संकेत हुन सक्छ
December 19, 2020 Khabar Pati
May 24, 2021 goodmam
जब आफ्नो छोराको निधन हुने बित्तिकै मुटु प्रत्यारोपण गरि बाँचेका युवक ति आमालाई भेटन् जादा…
June 6, 2021 goodmam
नेपालसंग रिसाए नेपाली फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी रिसाउदै भने, ‘म जीवनभर नेपाल फर्कने छैन’ October 16, 2021
भारतका नेपाली भाषी भन्छन् : दशैँ हाम्रो गोर्खे परम्परा हो, हामी यो परम्परा छोड्दैनौँ October 16, 2021
क्रिश्चियन भएर पनि अमेरिकी राजदूतले यसरी टीका र जमरा लगाएर मनाए नेपालीको दशैँ ! October 16, 2021
यी ७ बर्षकी बालिका, जसले सजिलै उठाउँछिन् ८० किलो तौल October 16, 2021